29:2008 pm မှာဇွန် 6, 50
ကုန်တိုက်တစ်ခု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဒေတာစင်တာအဖြစ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကို e-budism လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
29:2008 pm မှာဇွန် 8, 39
ငါ Bean ဖလားကိုနှစ်သက်ပြီးသင်နှင့် Doug နှင့်စကားပြောခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပိုပြီးမကြာခဏလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျ (အခြား) Doug ရဲ့ဒေတာစင်တာ၏ခရီးစဉ်ရသောအခါငါ၌ရေတွက်!
29:2008 pm မှာဇွန် 10, 50
ငါ e-budism နှင့်အတူသဘောတူသည်။
ဒါမှမဟုတ် e-vana ။
ဒါကကုန်တိုက်အကြောင်းကိုကြောက်မက်ဘွယ်ပါ! Doug ဤကဲ့သို့သောအရာသို့ဖြစ်ခဲ့သည်မသိခဲ့ပါ။ ကောင်းတယ်
အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Doug ။ မနေ့ကငါနဲ့မင်း၊ Patric နဲ့ Bean ဖလား ၀ န်ထမ်းတွေနဲ့စကားများခဲ့တယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ယောက်ျားများအဘို့အစီစဉ်ပေး Eastgate တစ်ခရီးစဉ်ရပါလိမ့်မယ်။